यो राशी भए’का मानिसहरु हु’न्छन अत्यन्तै मेहनती सबैभन्दा धनि, ‘तपा’ईको रा’शी कु’न हो’ ? – Butwal 24 News
यो राशी भए’का मानिसहरु हु’न्छन अत्यन्तै मेहनती सबैभन्दा धनि, ‘तपा’ईको रा’शी कु’न हो’ ?
August 7, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on यो राशी भए’का मानिसहरु हु’न्छन अत्यन्तै मेहनती सबैभन्दा धनि, ‘तपा’ईको रा’शी कु’न हो’ ?
हरेक व्यक्ति धनी बन्ने सपना देखेको हुन्छ । विश्वमा अर्बपतिहरुलाई फ्लो गर्ने व्यक्तिहरु हुन्छन् । धनी बन्नुको पछाडि मेहनत,व्यवसाय गर्ने तरिका तथा कोही व्वक्ति भाग्यशाली मानिन्छन् ।कोही व्यक्ति राशीमा जन्मने आधारमा पनि व्यक्ति धनी भएको विषय जोड्ने गर्छन् । धेरै व्यक्ति आफ्नो राशीलाई धनी बन्ने आधारम जोड्न चाहन्छन् ।एक वेव’साइट लभमनीले गरेको अध्ययन अनुसार वि’श्वमा मेश राशी भएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी धनी छन् । वेवसाइटले फोब्र्सले सा’र्वजनिक सबैभन्दा बढी धनी एक सयजनाको राशीको अध्ययन गरेको थियो ।
सर्वेमा एक सय अर्बपतिको लिस्टमा १३ यस्तो नाम थियो । जसको राशी मेश थियो । त्यसमा भारतका सबैभन्दा बढी धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी,गुगलका सह सं’स्थापक ल्यारी पेज,जारा कम्पनीका संस्थापक अमानसिओ आरटेगा रहेका छन् । सर्वेले मेश राशी हुने व्यक्ति साहसी,दृण नि’श्चयी, आत्म विश्वासी र इमान्दार हुने जनाएको छ ।यस्तै सर्वेमा यस्तो राशी हुने मुडी,धैर्य राखन नसक्ने हुने बताएको छ ।
फोब्र्सको लिस्ट अनुसार दोस्रो धनी हुने व्यक्तिमा सिंह राशीका व्यक्ति छन् । सर्वेले १० जना अर्बपति सिंह राशीको भएको जनाएको छ । यसमा गुगलका सहसं’स्थापक सर्जे ब्रिन तथा ओर्याकलका सं’स्थापक ल्यारी एलिसन लगायत छन् ।सर्वेमा सिंह राशी हुने क्रियटिव,उदार तथा खुसी हुने खाला हुने तथा कमजोरीमा सुस्त जिद्दी र आफ्नो बारेमा बढी सोच्ने हुने जनाइएको छ । यस्तै सर्वेमा तुला राशी हुने १० जना अर्बपति छन् ।
सिंह राशी र तुला राशी हुने अर्बपति बराबरको संख्यामा रहेका छन् । यसमा लरियलका उत्तराधिकारी लिलियाने बेटेनकोर्ट,एचएडएमका अध्यक्ष स्टेफन परसान तथा वालमार्टका एलिस वालटन रहेका छन् ।तुला राशी हुनेहरु सामाजिक तथा अर्कालाई सहयोग गर्ने तथा खुला मनको हुने तथा कुटनीतिक खालको काम गर्ने ढिला काम गर्ने हुने सर्वेले जनाएको छ । यसपछि वृश्चिक राशी हुने अर्बपतिको संख्या ९ जना रहेको छ । यसमा विश्वका सबैभन्दा बढी धनी व्यक्ति बिल गेट्स चीनका अर्बपति किंग वांग जियानलिन छन् ।
सर्वेका अनुसार वृश्चिक राशी हुनेहरु हिम्मती तथा साधन स्रोत सम्पनन हुने तथा कमजोरीमा शंकालु हुने जनाइएको छ । सर्वेमा सहभागी ८ जना अर्बपतिको राशी वृष रहेको थियो । जसमा फेसबकुका सं’स्थापक मार्क जुकरवर्ग,जर्मनीका सबैभनदा बढी धनी महिना सुसाने क्लाटेन तथा कोच इन्डष्ट्रीका उपाध्यक्ष डेविट कोच यो सूचिमा छन् । सर्वेले वृष राशी हुने व्यक्तिलाई नेतृत्व क्षमता भएको व्यवहारिक र जिम्मेवार हुने बताएको छ । तर,वृष राशी हुनेहरु स’म्झौता नगर्ने तथा जि’द्दी हुने उल्लेख छ ।
एक सयभनदा बढी अर्बपतिको सूचिमा ८ जना अर्बपति कुम्भ राशीका छन् । यसमा न्यू’योर्क सहरका पूर्व मेयर तथा व्यवसायी माकइल ब्लूमर्ग,मेक्सिकोका टेलिकमका टाइकुटन कार्लोस स्लिम लगायतको नाम छ । यो राशीका व्यक्तिहरु स्वतन्त्र विचार राख्ने प्रोग्रेसिव हुने उल्लेख छ ।सर्वेमा सा’मेल अर्बपतिमा ७ जनाको राशी मकर रहेको छ । जसमा अमेजनका संस्थापक तथा अहिलेको एक नम्बर अर्बपति जेफ बेजोस,रुसका अर्बपति भ्लादिमिर पुटिन नाममा छ । यो राशी हुनेहरु अनु’शासित तथा नेतृत्व गर्न सक्ने कला भएका व्यक्ति हुने जनाइएको छ ।
१०० अर्बपतिको लिस्टमा ७ जना अर्ब’पतिको राशी मिथुन छ । जसमा थम्सन रोयर्टसका अध्यक्ष डेविट थमसन,वालमार्टका जिम वाल्टन लगायतका अर्बपति छन् । मिथुन राशी हुने व्यक्ति सिक्ने खोज्ने आफ्नो विचारलाई सा’र्वजनिक गर्ने नयाँ नयाँ खालका कुरामा उत्सुक हुने तथा अत्याधिक नर्वस हुने उल्लेख गरिएको छ ।स’र्वेमा सामेल ७ जना अर्बपतिको राशी मिन रहेको छ । जसमा एल’भिएमएचका सिइओ बनार्ड अरनल्ट तथा मिडिया टाइकन श्रपर्ट मर्डोक र डेलका सं’स्थापक मा’इकल डेल रहेका छन् । रिपोर्टमा मिन राशी हुनेहरु सहज ढंगले ज्ञान लिने बु’द्धिमान र कलाप्रेमी हुने तथा छिटो आत्तिने स्व’भावका हुने उल्लेख छ ।
सर्वेमा सामेल एक सय अर्ब’पतिमा ६ जनाको राशी धनु छ । जसमा प्रोपटीका टाइकुट डेविड साइमन तथा हिंदुजा बदर्स रहेका छन् । स’र्वेमा सहभागी १०० अ’र्बपतिमा ५ जनाको राशी कन्या थियो । जसमा सेयर बजारका बादशाह वारेन बफेट,अलिबाबाका सं’स्थापक ज्याकमा सामेल छन् । यो राशीका व्यक्ति भरोसा गर्न सकिने र मेहनती हुने उल्लेछ । यस्तै कर्कट राशी हुने अर्बपतिको सं’ख्यापनि ५ जना नै छ । यसमा टेस्ला मोटरका फाउन्डर तथा सिइओ एलन मक्स रहेका छन् ।
लकी सिद्धुले गाए ‘टुङ्नाको धुन’को कभर (भिडियो सहित हेर्नुहोस )
कलंकी खसी बजारबाट खसी भन्दै बाख्रीको मासु बेच्ने ४ भारतीय पक्राउ
आफ्नै बुवा आमाविरुद्ध चर्चित अभिनेता थलापति विजयले दिए उजुरी